आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र १७ गते बिहीबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र १७ गते बिहीबार
भदौ १७, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल भाद्र १७ गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ सेप्टेम्बर २ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रकृष्णपक्षको एकादशी तिथि भोलि विहान ५:२७ बजेसम्म, त्यसपछि द्वादशी रहनेछ ।
मेष : श्रमको सही रुपमा मूल्यांकन पाइनेछ । गरेका काम कार्यबाट सुख सन्तोष मिल्नेछ । मित्र मिलन हुनेछ । सहयोगीको उचित साथ मिल्दा नयाँ कार्यको आरम्भ गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा रुचि रहनेछ ।
वृष : इच्छा आकङ्क्षाहरु थपिने छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगतिको संकेत देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा अरु दिनको तुलनामा लाभांश बढ्नेछ । सानो प्रयासले नै कार्यहरु बन्नेछन् । खुसीयाली वातावरण बन्नेछ ।
मिथुन : कृति प्रदायक कार्य गरिनेछ । घरायसी समस्या हल भएर जानेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । ठूलाठूला कार्य पनि बोलिकै भरमा बन्नेछन् । सामाजिक पदप्रतिष्ठा प्राप्त होला । हर्षको खबर मिल्नेछ ।
कर्कट : लहैलहैमा लाग्दा अनावश्यक खर्चभार थपिनेछ । झन्झटिला कार्यको नेतृत्व गर्नु पर्नेछ । अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा ध्यान जानेछ । आफ्नै निर्णयले आँफैलाई समस्यामा पार्न सक्छ, सजक रहनु होला ।
सिंह : छोटो रमाइलो यात्राको संभावना देखिन्छ । कलात्मक कार्यमा मन जानेछ । थालेका अधिक कार्य बन्नेछन् । आम्दानीका बाटाहरु फेला पर्नेछन् । अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमलाई पहल गर्दा उठाउन सकिनेछ ।
कन्या : विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन गाँसिनेछ । पारिवारिक समस्या हल भएर जानेछ । दैनिक गर्दै आएका कार्यमा समेत नयाँ तरिकाको प्रयोगले सहज हुनेछ । नोकरीमा प्रशंसा एवं नयाँ जिम्मेवारी मिल्नेछ ।
तुला : भाग्यले साथ दिँदा छोटो समयमा नै गरेका कार्यबाट प्रतिफल मिल्नेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । अरुको सस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा आनन्द लाग्नेछ । कल्याणकारी कार्यमा सहभागी भइनेछ ।
बृश्चिक : अवसर हुँदाहुँदै पनि विकल्प रोज्नाले विशेष कार्यमा पछि परिनेछ । गोपनीयता बाहिरीँदा विपक्षीले फाइदा उठाउने छन् । विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्ने छन् । दैनिक कार्यमा नै व्यस्थ रहनु उचित हुनेछ ।
धनु : मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सरीक हुने अवसर मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहनेछ । अरु दिन विरोध गर्नेहरु पनि समर्थनमा आउँदा कार्य गर्न सहज हुनेछ । विपरीत लिंगिको सहयोगले कार्य बन्नेछ ।
मकर : व्यवसायबाट सन्तोष मिल्नेछ । रोकिएका वित्तिय कारोवारले गति लिनेछन् । सानातिना समस्यामा नआत्तिनु होला, निरन्तर लाग्दा प्रतिफल तपाईँकै पक्षमा हुनेछ । सामाजिक कार्यमा समेत चासो रहनेछ ।
कुम्भ : पारिवारिक सहयोग सद्भाव बढ्नेछ । बौद्धिक कलाको प्रशंसा मिल्नेछ । सुखसुविस्ता उपभोग गर्न पाइनेछ । पढाइलेखाइमा सामान्य प्रयासले नै सिप सिक्न र बुझ्न सकिनेछ । प्रतिभाका कार्यमा विजयी भइनेछ ।
मीन : बोलिकै कारण बन्नै आँटेका कार्यमा समेत विराम लाग्नेछ । सोचे अनुरुप कार्य नबन्दा दिक्क लाग्नेछ । लक्ष्यमा पुग्न कडा परिश्रमको जरुरत पर्नेछ । पूर्व तयारीका साथ मातृ पक्षको सहयोगले कार्य गर्नुहोला ।
आजको राशिफल, वि.सं. २०७८ साल कार्तिक १० गते बुधबार
आजको राशिफल, वि.सं. २०७८ साल असोज २२ गते शुक्रबार
आजको राशिफल, वि.सं. २०७८ साल असोज २१ गते बिहीबार
आजको राशिफल, वि.सं. २०७८ साल असोज १८ गते सोमबार
आजको राशिफल, वि.सं. २०७८ साल असोज १५ गते शुक्रबार
आजको राशिफल २०७८ साल असोज ७ गते बिहीबार